Shear: waa maxay, astaamaha iyo cawaaqibka duulimaadka | Saadaasha Shabakadda
Maanta waxaan ka hadlaynaa mid ka mid ah ifafaalaha saadaasha hawada ee ugu halista badan. Waxay ku saabsan tahay xiirid. Shilalka hawada ee ay sababaan saadaasha hawada iyo xaaladaha deegaanka waxaa ka mid ah xiirid. Kaliya wax ka yar 10% shilalka waxaa sababa cimilada. Xitaa sidaas oo ay tahay, ifafaalahaani waa sababta labaad, ee ka dambeeya caleenta, oo soo saarta shilalka.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegaynaa dhammaan sifooyinka, asalka iyo cawaaqibka xiirashada.
2 Xaaladaha jawiga xiirid
3 Xiirashada iyo duulista hawada
4 Isbedelada xagalka
Waxa ugu horreeya oo dhan waa in la ogaado waxa xiiriddu tahay. Waxaa sidoo kale loo yaqaan magaca dabaysha xiirashada iyo waa faraqa xawaaraha dabaysha ama jihada udhaxeysa labada dhibcood ee jawiga dhulka. Waxay kuxirantahay haday labada dhibic kala aragti duwanyihiin meelaha juqraafiyeed ee kaladuwan, xiiriddu waxay noqon kartaa mid toosan ama toosan.
Waxaan ognahay in xawaaraha dabayshu ay inta badan kuxirantahay cadaadiska Hawada. Jihada dabayshu waxay u socotaa iyadoo loo eegayo cadaadiska Hawada. Haddii meel ay jirto cadaadis hawo hooseeya, dabayshu waxay aadi doontaa dhankaas maadaama ay "buuxinayso" booska hadda jira hawo cusub. Xiirashada dabayshu waxay saameyn kartaa xawaaraha duulimaad ee diyaaradda inta ay duushay iyo markii ay soo degeysay masiibo Waa in maskaxda lagu hayaa in labadan weji ee duulimaadku ay yihiin kuwa ugu nugul.
Wejiga dabaysha ayaa si daran u saameyn kara saldhigyadan duulimaadka. Sidoo kale waa qodob xukuma daruufaha duufaanka. Waxay kuxirantahay socodka dabaysha, xawaaraha, iyo cadaadiska cimilada, waxaad u sheegi kartaa darnaanta duufaanka. Hanjabaad dheeri ah waa qalalaase had iyo jeer lala xiriiro xiirid. Waxaa sidoo kale saameyn ku leh horumarka duufaanada kuleylaha. Waana isbeddelka ku yimaadda xawaaraha dabaysha oo saamaynaya isbeddellada saadaasha hawada ee badan.
Xaaladaha jawiga xiirid
Aan aragno waa maxay xaaladaha ugu muhiimsan ee jawiga ee aan ka heli karno dhacdadan saadaasha hawada inta lagu jiro duulimaadka ama si fudud jawiga:
Jihooyinka iyo nidaamka hore: Xiirashada dabaysha oo weyn ayaa la ogaan karaa marka farqiga heerkulka ee dhinaca hore uu yahay 5 darajo ama ka badan. Sidoo kale waa inay ku socotaa ilaa 15 nood oo xawaare ama ka badan. Hordhacyadu waa ifafaalo ku dhacda saddex cabbir. Xaaladdan oo kale, xiiritaanka soo food leh ayaa lagu arki karaa dherer kasta oo u dhexeeya dusha iyo tropopause. Waxaan xasuusnaa in dhul-badeedku yahay gobolka jawiga ay ka dhacaan dhacdooyinka saadaasha hawadu.
Caqabadaha qulqulaya: Markay dabayshu ka kacdo jihada buuraha, jaranjarada taagan ayaa laga arki karaa jiirada. Tani waa isbeddelka xawaaraha dabaysha maadaama hawadu u janjeedho inay u kacdo dhinaca buuraha. Waxay kuxirantahay culeyska jawiga ee xawaaraha ay dabayshu bilawdo, waxaan arki karnaa koror kororka ama kayar.
Maalgashi: Haddii aan ku jirno habeen cad oo xasilloon, soo noqoshada shucaaca ayaa laga sameeyay agagaarka dusha sare. Rogitaankani wuxuu muujinayaa in heerkulka dusha sare uu ka hooseeyo dhulka dushiisa oo uu ka sarreeyaa joogga. Khilaafku ma saameynayo dabaysha ka sarraysa. Isbedelka dabayshu wuxuu noqon karaa 90 darajo jihada iyo ilaa 40 gunti oo xawaare ah. Qaar ka mid ah socodka hoose ayaa la arki karaa habeenkii. Kala duwanaanshaha cufnaanta ayaa sidoo kale sababi kara dhibaatooyin dheeri ah duulimaadka. Ha iloobin in cufnaanta ay tahay cunsur muhiim u ah jihada dabaysha.
Xiirashada iyo duulista hawada
Waanu eegi doonaa waxa dhaca markay dhacdadan saadaasha hawadu dhacdo oo aynu diyaarad raacno. Jaleecada hore way adag tahay in la garto. Eta waxaa loola jeedaa in duuliyeyaasha duulimaadyadu aysan aad ugu fududayn in la aqoonsado noocyada noocan ah ee saadaasha hawada. Warbixinnada duulimaadyada, duuliyeyaasha waxaa si wanaagsan loogu wargaliyay xaaladda ka taagan wajiga noocan oo kale ah si ay u diyaar garoobaan oo ay u qaadan karaan xalal wax ku ool ah. Xaqiiqdii, diyaarado badan ayaa leh qalab xiirid.
Markaad hesho aag ay dabayshu u jeeddo isbeddelo gabi ahaanba dhexda qaadka ama soo degida, waxa ugu fiican ee la qaban karaa ma aha in la beddelo qaabeynta diyaaradda oo la dhigo awoodda ugu badan. Haddii ay dhacdo in la soo dego, waxaa fiican in la iska soo tuuro dhaq dhaqaaqa oo la fuulo ka hor inta aan la gelin aagga. Xaalad kasta, waa in lagu xisaabtamo inay tahay xaalad cakiran in la maareeyo, maadaama neerfaha ay sidoo kale ciyaari karaan ciyaar xun.
Sababta ifafaalahaani waa mid kaladuwan oo badiyaa saameyn ku leh xaaladaha maxalliga ah ee garoon kasta. Ereyga dhulka ku xeeran ayaa mas'uul ka ah leexinta socodka ama dabaysha. Tusaale ahaan, jasiiradaha Canary, garoomada diyaaradaha ayaa si aad ah ama ka yar u saameeya sababo la xiriira gargaarka muhiimka ah ee jasiiradaha. Waa halkan halka aan ku aragno in ifafaalooyinka qaarkood ay ku soo noqnoqdaan diyaaradaha ka dega degaannadaas.
Aynu qiyaasno diyaarad duulimaad toos ah iyo heer sare ah oo ku jirta aag qulqulka hawadu u socoto jihada hoos u socota. Firfircoonida awgeed, diyaaradda waxay daqiiqad ku joogi doontaa xawaare joogto ah iyo dhabbiil la xiriira Dhulka. Inta lagu jiro wakhtigan oo dhan, hadda wax ku oolka hareeraheeda baalasha ayaa durba la jaanqaadaya waddadiisa duulimaadka, laakiin waxay yeelan doontaa qayb taagan. Qolka ayaa la kulmi doona eedeyn xun waxaana duuliyaha lagu xakameyn doonaa suunka halka kursiga uu ku hoos burburi doono.
Ka dib markii hore ee gelitaanka hoose, Saamaynta tamarta ayaa sii kordheysa diyaaradduna waxay soo ceshanaysaa xagalkeedii oo iskeed ah. Sidan oo kale, waxay ku sii wataan midab ahaan si caadi ah, illaa waddada duulimaadka cusub ay ku darto heerka asalka ee la xiriira Dunida. Taasi waa, oo u dhiganta qulqulka hawada ama qulqulka hadda waxaa ku jira qayb ka mid ah kor u kaca.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto waxyaabo badan oo ku saabsan shilalka iyo astaamaha lagu garto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Xiir